DAGAALKA QARNIGA: Anthony Joshua Oo Saadaaliyay Midka Guulaysan Doona Muruqyo Waynta Deontay Wilder vs Tyson Fury Ee Aanu Midna Hore U Soo Guuldaraysan. - GOOL24.NET
DAGAALKA QARNIGA: Anthony Joshua Oo Saadaaliyay Midka Guulaysan Doona Muruqyo Waynta Deontay Wilder vs Tyson Fury Ee Aanu Midna Hore U Soo Guuldaraysan.
Hal todobaad oo kaliya ayaa ka hadhsan waqtiga ay indhaha caalamku ku soo jeedsan doonaan feedhka miisaanka culus ee dhex mari doona ragga aan soo guuldaraysan ee Deontay Wilder iyo Tyson Fury laakiin waxaa ugu danbayn saadaal rasmi ah sameeyay ninka aan isna waligii soo guuldaraysan ee Anthony Joshua oo ay suurtogal tahay in uu Wilder la ciyaari doono kulan si wayn loo sugayo.
Kulanka feedhka miisaanka culus ee aduunka ee dhex mari doona Deontay Wilder iyo Tyson Fury waxa uu qabsoomi doonaa December 1,2018 wuxuuna ka dhici doonaa Staples Centre oo ku taala Los Angeles, laakiin su’aasha ugu wayni waxay tahay midka guulaysan doona.
Tyson Fury oo u dhashay dalka Ingiriiska ayaan wax dagaal heer caalami oo wayn soo galin tan iyo November 2015 markaas oo uu guul wayn ka gaadhay Wladimir Klitschko waxaana lays waydiinayaa haddii uu awood u yeelan karo in uu joojiyo ninka Championska hadda ah ee Wilder oo markii hore la filayay in uu kulan layaableh la qaadanayo Anthony Joshua kaas oo kadib kulankan la rajaynayo in uu suurtogal noqon karo.
Deontay Wilder waxa uu u dhashay dalka Maraykanka waana feedhyan lagu hoogay kaas oo 39 jeer dhulka ugu soo tuuray raggii uu ka hor yimid isaga oo soo wada guulaystay dhamaan 40 kii dagaal ee uu galay waxaana lays waydiinayaa haddi uu Fury markale dhulka dhigi karo.
Aduunka oo dhan ayaa saadaalinayay waxa laga filan karo kulanka Fury iyo Wilder laakiin ugu danbayn waxaa la helay saadaashii la sugayay ee Anthony Joshua kaas oo ah ninka difaacanaya suumamka WBA, IBF iyo WBO wuxuuna aaminsan yahay in ninka uu wada xaajoodkoodii burburay ee Wilder uu guulaysan doono.
Anthony Joshua oo saadaalinaya Wilder vs Fury ayaa yidhi: “Hadda Wilder waa Champions isla markaana haddii uu guulaysto, waxa uu samayn kara waxa uu doonayo isagu, haddii uu Fury guulaysto, Wilder waxa uu dalban doonaa kulan ku celis ah, sidaa daraadeed, qorshaha ayaa isku yara qasmi doona. Si kastaba ha ahaatee, aniga ahaan Wilder ayaa guulayan doona. Isaga ayaa guulaysan doona’.
Anthony Joshua oo loo arko ninka kaliya ee joojin kara Wilder oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaan u baahanahay in uu Wilder guulaysto. Aniga waxay i siinaysaa fursad aan isaga kula dagaalamo. Ka Champions ahaan, haddii uu isagu difaacdo suunkiisa, waxa uu noqon doonaa dagaalkii uu dadku sanado badan doonayay, sidaa daraadeed, waxaan rajaynayaa in 2019 ay aniga sanad wayn ii noqon doonto”.
Haddii ay dhacdo in Wilder uu garaaco muran badanaha Ingiriiska ee Fury, waxay markaas aduunku sugi doonaa in wada xaajoodyadii Anthony Joshua iyo Wilder ay soo noqdaan si loo heli karo mid ka mid ah feedhkii taariikhda ugu waynaa.
Halkan hoose ee 2 riix si aad qaybta kale u sii akhrisato.
OSMAN GAYOOBE says:
sxb ma my weather vs tyson fury baa bal iikala cadde erayga ,wilder iyo weather ma isku qoraalbaa